Macluumaad Mac, jadwalka isku dhafan hawlaha, dhacdooyinka, mashaariicda iyo in ka badan | Waxaan ka socdaa mac
Macluumaadka Mac, jadwalka isku dhafan hawlaha, dhacdooyinka, mashaariicda iyo waxyaabo kale oo badan
Waqtiyadaan la joogo, dad badan ayaa waxaa hareeyay dhacdooyinka tirada badan, shaqooyinka, balamaha, mashaariicda, howlaha, iwm ee ay tahay inay maalin walba la tacaalaan, ha ahaato dhanka shaqsiga, goobta shaqada, waxbarashada ama dhamaan iyaga ka mid ah isku mar.
Nasiib wanaagse, horumarinta codsiyada xusuus-qorrada, kalandarrada, xusuusinta, maareeyayaasha hawsha iyo codsiyada kale ee la xiriira ayaa si gaar ah u fududeeyay himilada maareynta howlahayaga oo dhan, laakiin markaa dhibaato cusub ayaa soo baxda: waxaan helnaa barnaamijyo fara ku tiris ah, oo mid kasta oo ka mid ah loogu talagalay wax gaar ah. Ma qiyaasi kartaa inaad karti yeelan karto ku dhex dar codsi keliya dhacdooyinkaaga oo dhan, ballamahaaga, qoraaladaada, howlahaaga ...? Waa hagaag taasi waa si sax ah Xogta Mac, koronto aad u wanaagsan oo hadda aad sidoo kale ku heli karto qiimo dhimis dhan 70% sicirkeedii asalka ahaa.
Midee howlaha, dhacdooyinka, ballamaha, qoraalada, iyo inbadan oo la socda Xogta Mac
Xogta Mac Waa a barnaamijka kalandarka loogu talagalay Mac oo sare u qaadeysa khibradda heer cusub oo wax ku ool ah iyo wax soo saar iyadoo la noqonayo a Buuxi qorsheeyaha iyo abaabulaha Kalandarka, Hawlaha, Mashaariicda, Qoraalada iyo aalado kale oo badan oo kuu ogolaanaya inaad si maalinle ah u nidaamiso.
Mid ka mid ah faa'iidooyinka ugu waaweyn waa iyada heerka sare ee isbadalka taas oo kuu oggolaaneysa inaad si fiican u baratid ballamahaaga, taariikhaha lagaa doonayo, iyo wixii la mid ah.
Waxay leedahay a interface abaabulay tabs, oo waxaad ku dari kartaa tabs inta aad u baahan tahay. Intaa waxaa sii dheer, waxay kujirtaa hawlgal raadinta oo awood badan, tifaftiraha qoraalka hodanka ah, suurtagalnimada in lagu daro qoraalada codka, miirayaasha caqliga leh si aad u abaabuli karto howlahaaga iyadoo lagu saleynayo qawaaniintaada, gelitaanka degdega ah ee mashaariicda, howlaha, hoosaadyada (heerar kala duwan), liistada hubinta , Focus View function si aad u aragto maalintaada jalleec ...
Xogta Mac Waxay leedahay qiimo asal ah $ 49,99 laakiin hadda waxaad ka faa'iideysan kartaa dhimis 70% ah iyo ku hel kaliya $ 14,99 Halkan. Kordhintu waxay ansax noqon doontaa afarta maalmood ee soo socota, markaa waxaad wali haysataa wakhti aad wax badan kaga ogaato astaamaheeda iyo shaqooyinka ku jira bogga internetka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Barnaamijyada Mac » Macluumaadka Mac, jadwalka isku dhafan hawlaha, dhacdooyinka, mashaariicda iyo waxyaabo kale oo badan
Beta-kii ugu horreeyay ee dadweynaha ee macOS High Sierra 10.13.1 iyo tvOS 11.1 ayaa hadda la heli karaa